Baolina kitra Euro 2012 – Tombanan’ny gazety eoropeanina ny famaranana: Espana-Alemana - AO RAHA Gazety Malagasy Online	Ny gazety Ao RahaTahiry
Baolina kitra Euro 2012 – Tombanan’ny gazety eoropeanina ny famaranana: Espana-Alemana
Nampiondrika an’i Croatie i Espagne, omaly
Lalao telo, fandresena telo. Ny ekipam-pirenena alemana irery no nahafeno isa, 9/9, izany hoe naharesy intelo tamin’ireo lalaom-bondrona telo nataony tamin’ity fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa eo amin’ny taranja baolina kitra na ny Euro 2012 atao any Ukraine sy Pologne. Tafavoaka velona tao amin’ilay vondron’ny fahafatesana ny Rainiboto, rehefa nanilika 1 no ho 0 ny Portogey, 2 no ho 1 ny Holandey sy ny Danoa. Voasokajy ho isan’ireo andrarezina sy andrandrain’ ny mpanara-baovao ny Euro amin’izao fotoana izao, indrindra fa tombanana ho tsy hampa- nano sarotra azy ireo ny hanilika ny Grika eo amin’ny dingan’ny ampahefa-dalana.
Efa mieritreritra ny fiverenan’ny lalaon’i Alemana sy Portugal eo amin’ny manasa-dalana sahady ny gazety vahiny any Eoropa any. Ny Portogey izay hifandona amin’ny Repoblika Tchèque amin’ny ampahefa-dalana.
Henjana kosa ny miandry ny Frantsay satria ny Espanôla tompon- dakan’i Eoropa sy tompon- daka eran-tany farany ho hiandry azy ireo amin’ny ampahefa-dalana. Na tsy nandresy lahatra loatra aza ny dian’ny Roja, dia mbola voafantina ho isan’ ireo andrarezina izy. Misy manombantombana ny famaranana Alemana sy Espana mihitsy aza ny any ivelany any. Ny Frantsay, izay lavon’i Suède 2 no ho 0 nandritra ny andro farany tamin’ ny lalom-bondrona nisy azy ireo.
Ny lalaon’i Italia sy Angletera kosa no sarotsarotra ny tombantombana, na dia mitongilana kely amin’ny Squadra Azzura aza ny hevitry ny mpanao gazety vahiny. Nangovitra ihany ny Anglisy tamin’ny lalaom-bondrona farany nihaonany tamin’ny tompon- trano, ka nandreseny 1 no 0 ny Okranianina.
Samy tsy nisy tafakatra dingana manaraka kosa izany ireo firenena mpampiantrano ny Euro 2012, dia i Pologne sy Ukraine.
Baolina kitra, Mpanoratra Rijakely, 21.06.2012, 08:57	FIARAHAMONINA